Oyena krebe mkhulu emhlabeni: yintoni kwaye uneziphi iimpawu | Ngeentlanzi
Oyena krebe mkhulu ehlabathini
Xa sithetha ngookrebe, kunzima kakhulu ukuba ungathelekisi iintlobo eziphakathi kwazo. Kule meko, siza kuvavanya kwaye sithelekise iintlobo ezahlukeneyo zobungakanani beekrebe ukuze sazi ukuba yeyiphi eyona shark inkulu ehlabathini. Ookrebe ziintlanzi zalusapho lweChondrichthyan. Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-360 ezaziwayo kwaye zizilwanyana eziye zafunyanwa kwiplanethi yethu ukususela kumaxesha angaphambi kwembali.
Kweli nqaku siza kuthelekisa ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu ngookrebe ukuze sifumanise ukuba yeyiphi oyena krebe mkhulu ehlabathini.
1 Oyena krebe mkhulu ehlabathini
1.1 Ukrebe omkhulu omhlophe
1.2 Sharking ukrebe
1.3 Umnenga ukrebe
Njengokuba kukho iintlobo ngeentlobo ezininzi ezazi malunga nobukho bukakrebe ngaphezulu kweminyaka engama-400 ezigidi, kunzima kakhulu ukwazi ukuba yeyiphi eyona shark inkulu ehlabathini. Imifanekiso yokrebe iyabonakala ngokulula kuye wonke umntu, nokuba kungenxa yokuba sizibonile kwiindawo zasemanzini, kwiingxelo zikamabonwakude, kumaxwebhu abhaliweyo okanye kwiimuvi.
Okungakumbi kuyaziwa ukuba ukrebe waziwa njenge isilwanyana esiqhelekileyo esizenza ngathi sitya bonke abantu abasehlabathini. Luhlobo lwerhamncwa olunamandla okumangalisa. Nangona kunjalo, ookrebe okanye ngaphezulu koku kubonakala. Sesinye sezona zilwanyana zikhulu kwaye zinomdla kakhulu kwiilwandle zethu nakwiilwandle.
Kuba kukho imisinga eyahlukeneyo kunye nezimvo malunga nokuba yeyiphi eyona shark inkulu ehlabathini, siza kuqala senze i-3 ephezulu kwabo banobukhulu obukhulu.
Ukrebe omkhulu omhlophe
El Ukrebe omhlophe Yenye yezona zaziwa kakhulu emhlabeni. Sesona silwanyana sisesona sisesona sisesona sineentshaba ezikhoyo. Inokuba nobunzima ukuya kuthi ga kwi-1.115 yeekhilo kwimeko yayo efanelekileyo. Indawo yokuhanjiswa kwayo inwenwela kuwo onke amalwandle ehlabathi. Zininzi ngokukodwa kunxweme olunamanzi ashushu eMntla Melika, emazantsi eAfrika, nakumazantsi nasentshona yeOstreliya.
Inamazinyo athe tyaba kakhulu kwaye imile okotolo. La mazinyo abonwayo ayilelwe ukuba akwazi ukusika iziqwenga zenyama kwixhoba. Ngokuqinisekileyo sesona silwanyana sisoyikekayo kulwandle lonke kwaye siyingozi kakhulu ekuhlaselweni njengoko sinesiphumo esibi ekulungeni kwaso. Kwaduma umbulelo owaziwayo kwimiboniso bhanyabhanya eyayinikezelwe kookrebe kwiminyaka yama-70s nama-80s. Kwezi bhanyabhanya, ookrebe abamhlophe babonwa besitya abo baphambili.
Ukusukela ngoko, Kukholelwa ukuba bonke ookrebe bayakwazi ukuqwenga abantu. Kwaye ikukuziphatha kwale rhamncwa limangalisayo. Nangona kunjalo, kunqabile ukuba ihlasele abantu, ngaphandle kokuba bayiphosise ngesinye isilwanyana esifana netywina. Inokuhlasela nabantu ukuba izoyikiswa. Ukuqonda ukuba awulilo ixhoba kuya kukushiya wedwa. Ingxaki xa ikuhlasela ngokungayiphathi ngesinye isilwanyana kukuba uhlaselo lwayo lokuqala ludla ngokuba luvuthisa kangangokuba ludla ngokubangela ukulahleka kwamalungu onke.
Nokuba angakushiya wedwa kwaye afumanise ukuba awuyiyo le nto ebeyikhangela, uyakuphulukana nelungu. Amabhinqa makhulu kunamadoda. Zihlala zikhulu ngohlobo oluthile. Udumo lwesilwanyana esidla amadoda alufanelanga kwaphela kuba sisilwanyana esikhetha ixhoba laso kakuhle. Kukho iintlobo ngeentlobo zeelwandle ezibangela uhlaselo ngakumbi ebantwini kunokrebe omhlophe.
El ukubhaka ukrebe ngaphezu kobukhulu obunokufikelela kwiimitha ezili-10 ubude kunye nobunzima obufikelela kwiitoni ezi-4. Yeyona ukrebe wesibini ngobukhulu emhlabeni. Inophawu oluphambili kwaye oko kukuthi babaleke ekudadeni bavule umlomo. Ke, icoca amanzi kwaye iqokelela iiplankton ukuze izondle.
Enye yemithombo ephambili yokutya kwesi silwanyana yi-zooplankton. Enkosi kumthamo wokucoca, inokucoca ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-2.000 XNUMX zamanzi ngeyure. Inenye yeendlela zokuvelisa ezingaziwayo ngokweenkcukacha zabantu. Kucingelwa ukuba zinokuba zii-oviparous, kodwa xa amaqanda eqandusela azenza ngaphakathi esiswini sikanina. Kungelo xesha ke apho abancinci belwa omnye wabo phambi kokuba bakwazi ukuphuma baye ngaphandle. Olu hlobo lokuvelisa kwakhona lubizwa ngokuba yi-ovoviviparous.
Olunye uhlobo olunobukhulu obungalinganiyo bomlomo kodwa alunabungozi kwaphela. Ubungakanani bomlomo wabo bubangelwa kukutya kwabo okucoca ulwelo. Ikhetha amanzi abandayo kodwa kufutshane nomphezulu. Ke ngoko, sinokuyifumana ngokulula kwiindawo ezikude ne-Ikhweyitha kwaye inokufumaneka nakuluphi na ulwandle kunye neelwandle emhlabeni.
El whale shark ngegama libonisa oko Yeyona ntlanzi inkulu kuzo zonke iintlanzi ezihlala emhlabeni. Kunokuthiwa yeyona okrebe mkhulu ehlabathini. Ngukrebe ofikelela kwiitoni ezingama-36 ngokobunzima. Itya iplankton, ulwelwe oluncinci, iintlanzi ezincinci kunye nee-crustaceans. Ilima phantse kuwo onke amalwandle ehlabathi. Nangona ikrebe kwaye ikhe ibe njalo, ikrebe elikhuselayo.
Luziimitha ezingama-20 ubude. Xa ivula umlomo iyakwazi ukuginya amanzi kwaye emva koko ipompe ngegill yayo. Kule gill inezakhiwo ezintle ezibizwa ngokuba ziidermicles zedermal kwaye ziyakwazi ukubamba phantse nasiphi na isidalwa esenzeka ukuba sibe yi-2 mm ubude.
Lo mzekelo unokubizwa ngokuba ngukumkani wookumkani. Ithathwa njengeyona krebe inkulu ehlabathini kwaye iyakwazi ukukwenza ungcangcazele ukuba ukufuphi kuyo. Nangona kunjalo, ayinabungozi njenge dolphin. Ayisiyongo ebantwini okanye kuninzi lweentlobo zolwandle.
Nangona ihamba kuwo onke amalwandle kunye neelwandle zehlabathi, sinokuyifumana rhoqo kwiindawo ezikufutshane ne-Equator, apho amanzi afudumele kwaye enza ukuba athambekele ekubonakalweni kweplankton.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-shark enkulu emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Oyena krebe mkhulu ehlabathini
I-Digital pH yeemitha
Eyona sonar ilungileyo yokuloba